စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် 2015, ငါတို့မှာရှိတယ်4ငွေကုန်ခံနိုင်သောပစ္စည်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်သည်.
UV Print 260CM ကလေးသူငယ်များဘုတ်အဖွဲ့
14 အရောင်အသွေးစုံသော EVA sup board ဖြစ်သည်
ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ရန် PVC 427CM Inflatable sup ဘုတ်အဖွဲ့
320စင်တီမီတာ Inflatable sup ဘုတ်အဖွဲ့
ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်း ၃၈၅ စင်တီမီတာရှိသောလှော်ပြားကို
ကာဗွန် surfboard လျှပ်စစ် efoil ဘုတ်အဖွဲ့
အကောင်းဆုံးကိုတက်လှော်ဘုတ်အဖွဲ့ လှော်ဘုတ်ကိုတက်သည်အကောင်းဆုံးဖောင်း အကောင်းဆုံးဖောင်းပွ အကောင်းဆုံးကို infl sup board အကောင်းဆုံးလှော်ဘုတ်အဖွဲ့ထရပ် ဘုတ်အဖွဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လက်အိတ်လှော်ဘုတ်အဖွဲ့ ငွေကွေး inflatable လှော်ဘုတ်အဖွဲ့ ငွေလှော် လှော်တက်မတ်တပ်ရပ် လှော်ဘုတ်အဖွဲ့တက်မတ်တပ်ရပ် ရောင်းရန်လှော်ဘုတ်ထရပ်သည် infl supable infl sup board ရောင်းရန်အတွက်ငွေပေးချေ ငွေချေးစာချုပ်များ ငွေလှေလှော် အသက်ကယ်အင်္ကျီ ဘဝအင်္ကျီ ရေတံခွန် လှော်ဘုတ်အဖွဲ့ လှော်ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူ လှော်ဘုတ်အဖွဲ့စျေးနှုန်း လှော်ဘုတ်အဖွဲ့စျေးနှုန်းအကွာအဝေး လှော်ဘုတ်အဖွဲ့ယောဂ လှော်ပျဉ်ပြား ရေတံခွန် Paddleboard ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ paddleboard ယောဂ လှိုင် surfboard ပေါ်မှာရပ် မတ်တတ်ထပါ လှော်ထရပ် လှော်ဘုတ်ထရပ် sup SUP လှော် sup လှော်ဘုတ်အဖွဲ့ လှိုင်း .ရာဝတီ .ရာဝတီ，ရေတံခွန် ။ လှိုင်း ယောဂ ယောဂချစ်ခြင်းမေတ္တာလှော်ဘုတ်အဖွဲ့
ရောင်းရန်အတွက်ငွေပေးချေ – ဘာရှာရမလဲ?
အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးသော inflatable paddle board အတွက်အကြံပြုချက်များ
မှာဖောင်းပွ sup လှော်ဘော်ဒါ 40 မီတာမြင့်
အဘယ်ကြောင့် paddleboard ယောဂဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားသောထိခိုက်သည်
WEIHAI GREATSUP CO ။ , LTD
လိပ်စာ:NO.38 DESHENG လမ်း,GEJIA စက်မှုပန်းခြံ ,WENDENG ခရိုင်,WEIHAI CITY,ရှန်ဒန်ပြည်နယ်
ရောင်းရန်အတွက်ငွေပေးချေ – ဘာရှာရမလဲ? 2021.05.30
အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးသော inflatable paddle board အတွက်အကြံပြုချက်များ 2021.05.18
SUP ကိုမည်သို့မှန်ကန်စွာစီးနိုင်သနည်း 2021.03.11
SUP လှော်ကျွမ်းကျင်မှု 2020.12.11
မှာဖောင်းပွ sup လှော်ဘော်ဒါ 40 မီတာမြင့် 2020.11.20
အဘယ်ကြောင့် paddleboard ယောဂဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားသောထိခိုက်သည် 2020.10.22
ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် sups 2020.10.14
မေလ 2021 (2)
မတ်လ 2021 (1)
ဒီဇင်ဘာ 2020 (1)
နိုဝင်ဘာ 2020 (2)
အောက်တိုဘာ 2020 (3)
စက်တင်ဘာ 2020 (10)
သြဂုတ်လ 2020 (2)
ဇူလိုင်လ 2020 (5)
ဇွန် 2020 (3)
ပြီလ 2020 (1)
မတ်လ 2020 (7)
ဇန်နဝါရီလ 2020 (5)
အမှတ်အသားများ (Tags):ခန္ဓာကိုယ်လက်အိတ်လှော်ဘုတ်အဖွဲ့လှော်ဘုတ်အဖွဲ့ ဆက်ဖတ်ရန်
လှိုင်းတံပိုးများကိုရွှင်လန်းစွာတွန်းထုတ်ကြကုန်အံ့! Haven't you ever playedapaddle board yet? You're too "ထဲက"! Shawan Biguiyuan သူငယ်တန်းသမဂ္ဂလှုပ်ရှားမှုများသို့လာပါ! ဒီတနင်္ဂနွေ, Together with professional…
အမြန်လင့်ခ်များ ဆက်သွယ်ရန် အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ် သတင်းများ နမူနာစာမျက်နှာ
ထုတ်ကုန်များ Inflatable လှော်ဘုတ်အဖွဲ့
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဆက်သွယ်ရမည့်သူ : Jian Gu တယ်လီ : +86 13928276280 အီးမေးလ် : dep4@greatsup.com လိပ်စာ : NO.38 DESHENG လမ်း,GEJIA စက်မှုပန်းခြံ WENDENG ခရိုင်,WEIHAI CITY, ရှန်ဒန်ပြည်နယ်တရုတ်
မူပိုင်ခွင့် @ 2021 WEIHAI GREATSUP CO ။ , LTD